Petite Pod - 15min ukuhamba ukuya edolophini kunye ne-spa pool - I-Airbnb
Petite Pod - 15min ukuhamba ukuya edolophini kunye ne-spa pool
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguTracey
IPetite Pod yethu yindlu yeendwendwe esandula ukwakhiwa, yabucala kwaye ithokomeleyo ebekwe emva kwepropathi, phakathi kwegadi yethu. Kufanelekile kuye nabani na oceba ukuxakeka ehlola izithili zechibi elimangalisayo laseRotorua, iingoma zebhayisekile yeentaba kunye nemisebenzi yabakhenkethi. Inomnyango owahlukileyo onesitshixo, idesika encinci, kunye neendawo zokupaka ezitratweni. Kukho indawo yokugcina yokutshixa iibhayisekile kunye nokusetyenziswa kwe-spa pool ekhoyo xa uyicela.
Indawo epholileyo, exineneyo ebonelela ngebhedi etofotofo yobukhulu bukakumkanikazi enelinen ekumgangatho ophezulu kunye negumbi lokuhlambela labucala elinendlu yangasese kunye neshawari. Igumbi libandakanya ifriji encinci, i-microwave, ijug, i-toaster kunye ne-coffep plunger. Isidlo sakusasa esilula seesiriyeli, iyogathi, iti, ikofu kunye nobisi siya kubonelelwa.
4.89 · Izimvo eziyi-311
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi311
Ukuzijonga ngebhokisi yokutshixa.
Siyafumaneka ukunxibelelana ngokubhaliweyo okanye ngefowuni. Ndiyavuya ukuba nonxibelelwano oluncinci okanye oluninzi njengoko uthanda, kwaye ziyafumaneka ukuze uthethe ngeengcebiso malunga neRotorua.
Kukho iikati ezimbini ezinobuhlobo ezizulazula kwipropathi.
Siyafumaneka ukunxibelelana ngokubhaliweyo okanye ngefowuni. Ndiyavuya ukuba nonxibelelwano oluncinci okanye oluninzi njengoko uthanda, kwaye…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Rotorua